Sida wabiga wabiga, raacitaanka doomaha waxay raacaan balanqaadka guud ee baaskiil wadista iyo fudeyd sahlan, oo u oggolaanaya inay si dhakhso leh u daboolaan masaafada dhaadheer - gaar ahaan haddii aad leedahay baaskiil e-baaskiil.
Si ka duwan wabiyaasha quruxdooda badanaa waxay ku jiraan farshaxanimada dushooda iyo xariifnimada iyo dabeecadda shaqsiyeed ee hababka injineernimada wadada, oo ay ku jiraan lambarro yaab leh iyo noocyo qufulan iyo buundooyin kala duwan.
Qaarkood, sida Gota Canal, waxay leeyihiin meelo loogu talagalay duurjoogta, halka kuwo kale sida Kanal-ka Jarmalka Jarmalku yihiin kuwo muusikad-dhicis ah oo ka mid ah nooca binu-aadamka.
Halkan waxaa ah xulashooyinka tobanka doomaha ugu wanaagsan ee Yurub.
Kanalka Göta waxaa loo yaqaan 'qoob-ka-ciyaar buluug ah' oo Iswidhan ah, oo loo maro miraha cagaarka ah ee jaranjarada leh oo leh meelo badan oo lagu dabaasho.
Xagaaga ayaa jihada soo jiidata dalxiisayaal aad u tiro badan, qaar badan oo saaran doonyo ay ku jiraan qaar badmareenno waaweyn ah.
U fiirso qalcadda Karlsborg ama is deji mid ka mid harooyinka badan ee qurxinta leh ee ku teedsan.
Magaalada labaad ee Sweden, Gothenberg badanaa waa la iska indhatiraa, laakiin waa mid aad u soo jiidasho badan, oo leh wadooyin neclassical iyo taraamyo qurux badan oo leh dhaqan iyo kafateeriyado ay ka buuxaan.
U fiirso biyaheeda soo jiidashada leh sidoo kale.
Bilow / dhammee Sjötorp ilaa Gothenberg
Dhererka mayl 118 mayl / 190km
Kireysiga elektaroonigga ah Cykelkungen, Gothenberg
Faahfaahin dheeraad ah Bogagga shabakadda Gota Canal bogagga shabakadda Galbeedka Sweden
Kiel Canal, Waqooyiga Jarmalka
Wanaagsan oo si wanaagsan loo saxeexay, oo leh waddo tayo sare leh oo ay weheliso mid ka mid ah marinnada ugu caansan ee Jarmalka.
In kasta oo uu kanaalku yahay kaliya 61 mayl / 99 km dhererkiisuna yahay jid-baaskiil si fiican loo wada-socdo (oo lagu calaamadinayo 'Nord-Ostsee-Kanal-Route' oo dhan) waa 202 mayl / 325 km!
Sidee taasi macquul u tahay? Sababtoo ah waxay ku hagaajisaa jidkeeda halkii ay ku wareegi lahayd khadka kanaalka waxayna ku siineysaa vistas badan oo xiiso leh halkii ay ku xirnaan lahayd marinka kanaalka (in kasta oo gaagaabyo sidoo kale la heli karo).
Qiyaasta xaddiga kanaalka laftiisa ayaa ah mid cajiib ah oo xitaa wuxuu dejin doonaa xariiqyada mara badda.
Kiel lafteeda badanaa waa mid casri ah sababta oo ah in si xoogan loogu duqeeyo WWII, laakiin waxay haysaa kaniisad soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh iyo dekada dabiiciga ah ee halkan ku nooli way nool yihiin inta lagu gudajiray Kiel Week - dhacdadii ugu badneyd badweynta adduunka ee la qabtay intii lagu jiray usbuucii ugu dambeeyay ee Juun, oo keenay malaayiin soo booqda qaarna qaar 4,000 oo markab ayaa ka socda dalka oo dhan Jarmalka iyo dibedda.
Ku bilow / dhammee Brunsbüttel illaa Kiel
Dhererka mayl 202 mayl / 325km
Kireysiga elektaroonigga ah Gawaarida 2 Wheel 2 waxay leeyihiin safar abaabulan oo leh baaskiillo elektiroonig ah oo laga heli karo agagaarka kanaalka Kiel.
Faahfaahin dheeraad ah Websaydhka gobolka Hamburg
LF7 River Route, Netherlands iyo Belgium
In kasta oo tan loo yaqaan marinka wabiga (Wadada Ohereland ee Dutch), qaar badan oo ka mid ah wabiyada waa laga tallaalaa ama lagu daraa qeybna laga gooyaa.
Baaskiilleyda badan ayaa dooran doona inay ka bilowdaan Amsterdam, in kastoo LF7 ay dhab ahaantii ka bilaabato Alkmaar waqooyiga.
Marka laga yimaado Amsterdam xarunta kanaalka qaniga ah waxaad raacdaa wabiga Vecht, kanaalka Amsterdam-Rhine iyo kanaalka Merwede.
Adigoo adeegsanaya Brabant waxaad ka soo qaadaneysaa banka webiga Dommel iyo Kanalka Eindhoven.
Bangiyada webiga Maas iyo Albertkanaal Albert Canal ayaa ugu dambeyntii horseed u noqda magaalada wanaagsan ee Maastricht.
Sidoo kale waa safar taariikhda Holland ah oo booqashooyin ku tagaya meelihii ay mareen Dutch'ka 'Waterline', Wabiga Zaan oo leh guryo-dhaqameedyo midab-cagaaran iyo mashiinnada-dabaysha.
Wabiga Vecht waxaa lagu xardhay qalcado iyo guryo dalxiis oo laga dhisay xilligii dahabiga ahaa ee ay sameeyeen ganacsatada hodanka ah ee ka soo jeeda Amsterdam oo ah meel lagu nasto xagaaga.
Ku bilow / dhammee Alkmaar ilaa Maastricht
Dhererka mayl 239 mayl / 385km
Kireysiga elektaroonigga ah Waxaa jira dulmar guud oo ku saabsan xarumaha kireysiga baaskiilka ee Amsterdam ee Wadada Dalxiis ee Holland
Faahfaahin dheeraad ah Bog wadida Wadooyinka Wadooyinka Holland iyo bogga Weyn ee Holland
Magaalooyinka LF5 ee Beljamka ilaa Limburg
Sida Nederland, Biljamka waxaa ka gudbaya wadiiqooyin biyo mareenno ah iyo wadooyin baaskiil oo sifiican loo saxiixay.
Sida Nederland sidoo kale, inta badan waxaa jira kala dooro raacitaanka waddo dhakhso leh, toosan toos ah oo waddo toos ah ama doorashada waddo wareega ah oo booqanaysa magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo jiidashada kale ee jidka ku jira.
LF5 wuxuu ka talaaba aaga Flanders ee Belgium isagoo adeegsanaya xarumo badan oo kanaal iyo wabiyaal la daadiyey.
Wadada ay mareyso kanaalka, wadooyinka laamiga ah iyo dhismayaasha dhexe ee Wadooyinka Goobta Dhaxalka Aduunka, marinka Bruges-Ghent ee udhexeeya Ghent kadib wabiga Scheldt maadaama muuqaalka uu noqdo miyi bari dhanka bari, isbarbar dhiga dhowr wado oo biyo mareen ah.
Waxay ku dhamaanaysaa magaalada quruxda badan ee Thorn, oo caan ku ah dhismaheeda yar yar ee cad.
Bilow / dhammee Damme ilaa Thorn
Dhererka mayl 186 mayl / 300km
Kireysiga elektaroonigga ah Baaskiilkii Ben, Bruges
Faahfaahin dheeraad ah Fietsroute bogga
Kanaalka Nantes-Brest, Brittany, France
Xaqiiqdii inta badan taxanayaal wabi weel biyo mareen ah oo leh naqshad badan oo wadata kanaalka iyo muuqaal badan oo qurux badan iyada oo loo sii marayo aagga Brittany ee Faransiiska, oo caan ku ah dhaqankeeda kala duwan ee Celtic, cuntada (iyo cider) iyo luqadda.
Waxaa sidoo kale jira xiriiro badan oo kuxiran shabakada ballaaran ee Brittany ee wadooyinka cagaaran (in kabadan 500 mayl / 800km oo ka mid ah), kuwa badan oo kusalaysan jidadka hore ee tareenka oo bixiya fursada ah in lagu daro wadooyinka qulqulaya wadooyinka wadooyinka iyo wadooyinka fudud ee baaskiil wadooyinka si ay u booqdaan jiidaha ka fog kanaalka.
Meelo caan ah oo soo jiidasho leh wadada waxaa ka mid ah Pontivy, Josselin, Guérdelan Lake iyo magaalada qurux badan, ee Nantes.
Kanaalka wuxuu ka mid yahay wadada dheer ee Velodyssey oo waqooyiga ilaa koonfur ka xigta galbeedka France oo dhan.
Fiidiyahaani wuxuu muujinayaa qaybta waqooyiga ee wadooyinka oo leh sawiro badan oo kanaalka:
Ku bilow / dhammee Châteaulin ilaa Nantes
Dhererka Wareega 228 mayl / 365 km
E-bushkuleeti Hire Breton Bikes, Gouarec
Faahfaahin dheeraad ah Halkan khariidada iyo bogga faahfaahinta
Sidoo kale wadooyin fara badan oo Brittany ah Baaskiil wadista Buugga hagaha ee Baaskiil Waqooyiga Faransiiska
Ticino Cycleway, Italy
Wadada Ticino-ka Ticino ayaa sida caadada ah raacaysa dariiqa wabiga Ticino laakiin inta badan dhererkeeda wadiiqadu waxay ku socotaa banka loo yaqaan 'Direlio Bereguardo' iyo kanaalka 'Naviglio Grande'.
Qeybta ugu horeysa ee wadada waxay ku taal wadooyinka xasilloon kahor intuusan wadadu soo qaadin Naviglio di Bereguardo. Qeybta koonfureed ee Sesto Calende waa qeybta ugu quruxda badan wadada.
Waxay ku dhamaanaysaa magaalada jaamacadeed ee dhexe ee Pavia, waddo gaaban oo baaskiil wadata waa Certosa di Pavia, oo ah mid ka mid ah guryaha ugu waaweyn ee Yurub.
Ku bilow / dhammee Sesto Calende ilaa Pavia
Dhererka Wareega 75 mayl / 120 km
E-bushkuleeti Hire Cicloficina Garibaldi, Pavia
Faahfaahin dheeraad ah Bogga Tilmaamaha Baaskiilka Talyaaniga iyo Bogga Dalxiiska ee Varese
Castilla Canal, Spain
Macluumaadka ku saabsan kanaalada ka dhaca Isbaanishku waa kuwo aad ufiican, lagayaabo in daroogada laftooda ay aad u xun yihiin!
Kanaalka loo yaqaan 'Castilla kanaal' hadda si weyn ayaa loo adeegsadaa laakiin towpath-ka waxaa loo isticmaalaa munaasabad mtb sanadle ah kanaalku wuxuu ku siinayaa fursad aad ku dhammeysato bilicda dhexe ee jaamacadeed ee Valladolid iyo magaalada qadiimiga ah ee Madiina de Rio Seco.
Waxay ka baxdaa bannaanka qallalan ee aagga Tierra de Campos ee waqooyiga Spain oo caan ku ah xayawaanka xayawaanka ee deegaanka, oo ay ku jiraan Great Bustards iyo noocyada kale ee dhif ah.
Bilow / dhammee Alar del Rey (Palencia) ilaa Medina de Rio Seco, oo u dhaw Valladolid
Dhererka Wareega 93 mayl / 150 km
Faahfaahin dheeraad ah Bogga dalxiiska Isbaanishka bogga bogga Dhacdooyinka (Isbaanish oo keliya)
Jidka loo yaqaan 'Caledonian Way' oo ay kujirto Kanalka Caledonian, Scotland
Kani waa Waddo Xeebeedka Isboorti ilaa Xeebta, qaybta dhexe ee loo adeegsado kanaalka weyn ee Caledonian.
Haddii aad rabto ikhtiyaar gaaban Oban waa bar bilow wanaagsan, kaliya seddex saacadood oo tareenka ka socda Glasgow oo aad kaheleyso qaybo cajiib ah oo taraafikada taraafikada ah, kuna dhameystir isgoysyada xeebaha lochs.
Goobta buurta ee Fort William waxaad ku biirtaa marinka Caledonian-ka sax ah adoo isticmaalaya towpath-ka iyo wadooyinka iyo jidadka yar yar ilaa aad ka qaadatid wado yar oo fiican oo ka sareysa Loch Ness lafteeda, ka hor inta aan la gaarin ugu dambeynta ilaa Inverness ee tareenka iyo wadooyinka yaryar.
Bilow / dhammee Campbeltown illaa Inverness
Dhererka Wareega 237 mayl / 381 km
E-bushkuleeti Hire Wareegyada Nevis
Faahfaahin dheeraad ah Bogagga Sustrans
Adoo maraya xoogaa Ingiriis ah oo quruxsan iyo sidoo kale Joorjiyaal Bath iyo Bradford qadiim ah oo ku taal Avon, wadada loo yaqaan 'Kannet canal towpath' waa la ballaariyey oo loo wanaajiyay dadka baaskiilleyda iyo kuwa socod lugeeya.
Qufulka Caen Hill waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan ee shabakadaha biyaha ee UK oo dhan iyo Pewsey White Horse (mid ka mid ah sideed fardood ee cad ee Wiltshire) waxaa lagu arki karaa qeybta ugu dambeysa ee loo maro Akhriska oo adeegsanaya wadooyin yar yar iyo wadooyin.
Bilow / dhammee qubeyska illaa Akhriska
Dhererka Wareega 85 mayl / 137 km (waa la fidiyn karaa dhanka galbeed oo lagu raaco baabuur fiican iyadoo la adeegsanayo tubbada loo maro Bristol train, oo lagu daro 15 mayl / 24km masaafada)
E-bushkuleeti Hire Khadka Towfath Center, Bradford on Avon